Netflix မှအသစ် - ဒစ္စနေး၏ Moana လွှတ်ပေးချိန် - Netflix အသစ်ထုတ်လုပ်မှုများ
Netflix အပေါ်နယူး: ဒစ္စနေးရဲ့ Moana လွှတ်ပေးရန်အချိန်
New Netflix Disney S Moana Release Time
HOLLYWOOD, CA - နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်။ ။ (LR) မင်းသား Alan Tudyk၊ ရာခေလအိမ်၊ Auli'i Cravalho၊ Dwayne Johnson, Nicole Scherzinger နှင့် Temuera Morrison တို့သည် Disney Cap's ပြဇာတ်ရုံတွင်တနင်္လာနေ့တွင် World Premiere သို့တက်ရောက်သည်။ ဟောလိဝုဒ်, CA. အတွက်နိုဝင်ဘာလ 14, 2016 (ဒစ္စနေးအတွက် Jesse Grant / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Netflix ဒီဗီဒီအသစ်ဖြန့်ချိခြင်း (ဇွန် ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အပတ်): Logan, Get Out နှင့်ပိုမိုသောအရာများ ထိုနေ့၏ Netflix ပြပွဲ: The Ranch အပိုင်း 3
Disney's Moana ကို Netflix တွင်ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည်။ Netflix တွင်ရုပ်ရှင်ကိုသန်းခေါင်ယံပစိဖိတ် အချိန်မှစ၍ ကြည့်နိုင်သည်။
မေလတွင် Netflix ကကြေငြာခဲ့သည် ဒစ္စနေးရဲ့ Moana streaming service ကိုဇွန် ၂၀ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့မှာပြသမှာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်အများစုလိုပဲ Netflix က 12:01 a.m. Pacific Time မှာစီစဉ်ထားတဲ့ဖြန့်ချိတဲ့နေ့မှာဖြန့်ချိမှာပါ။
Moana ၂၀၁၆ နို ၀ င်ဘာလတွင်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ပြသခဲ့သည်။ ဒစ္စနေးအတွက်အောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။ Dwayne The Rock Johnson နှင့် Auli'i Cravalho တို့သည်အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သော Demigod Maui နှင့် Moana တို့ကိုအသီးသီးသရုပ်ဆောင်ကြသည်။
Ron Clements နှင့် John Musker၊ Lin-Manuel Miranda မှဂီတဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း၊ Moana သူမ၏ကျွန်းကိုကယ်တင်နှင့် Te Fiti ၏စိတ်နှလုံးပြန်လာမှလူငယ်တစ် ဦး ကမိန်းကလေးရဲ့ခရီး၏ပုံပြင်ကိုပြောပြသည်။
သက်ဆိုင်သော: 2017 ခုနှစ်တွင် Netflix သို့လာမယ့်ဒစ္စနေးရုပ်ရှင်
များအတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကိုကြည့်ပါ Moana အောက်မှာ! သင်သည် Disney ရုပ်ရှင်ပရိသတ်ဖြစ်လျှင် Netflix ၌ဤရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုသည်။
Moana ၂၀၁၇ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲတွင်အကောင်းဆုံးကာတွန်းရုပ်ရှင်များအတွက်အော်စကာဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သော်လည်းဆုအနိုင်ရမပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒစ္စနေးရဲ့ Zootopia, Netflix မှာလည်းစီးဆင်းနေပြီးအော်စကာကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။
ငါမဆိုသံသယရှိတယ်ထင်ကြပါဘူး Zootopia နှင့် Moana ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထဲကအကောင်းဆုံးနှစ်ခုဒစ္စနေးရုပ်ရှင်ခဲ့ကြသည်။ ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့အရမ်းခက်တယ်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်အလွန်ကောင်းပြီးသိသာထင်ရှားသည်။ သငျသညျသေချာဘို့င် Netflix ကအပေါ်တစ်ခုခုကိုရုပ်ရှင်နှင့်အတူမှားမသွားနိုင်ပါ။
Moana အလွယ်တကူဇွန်လအတွက် Netflix အသစ်ထုတ်လုပ်မှု၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်အားဖြင့်ပူးပေါင်းဖြစ်ပါတယ် ဘုရင်မ၊ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ရာသီ 5, နှင့် မွေးမြူရေးခြံ လ၏အကောင်းဆုံးအသစ်ပြပွဲများနှင့်ရုပ်ရှင်အဖြစ်အပိုင်း3။
Moana Netflix ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီရုပ်ရှင်ကိုစာရင်းထဲမှာထည့်လိုက်ပါတယ် Netflix မှာအကောင်းဆုံးကလေးတွေရုပ်ရှင် ပြီးနောက် Netflix အပေါ်အကောင်းဆုံးဟာသ အဖြစ်ကောင်းစွာ။
ဘယ်မှာ Eric Andre ပြပွဲစီးဆင်းရန်
ရာသီ3flash ကို netflix
တ ဦး တည်းလာကြတယ်လူရာသီ2ကာတွန်းစတူဒီယို
သဘောတူညီချက်၏ Donald Trump ရဲ့အနုပညာ